अनि उनले संसार देखे- समाचार - कान्तिपुर समाचार
अनि उनले संसार देखे
काठमाडौँ — २१ वर्षको उमेरसम्म उनले कालो रङ मात्रै चिनेका थिए । रंगीन संसारबारे सुनेका मात्र थिए । त्यो संसार कस्तो होला भनेर एकाधपल्ट कल्पना पनि गरेका थिए । जब त्यो दिन आयो अनि उनले थाहा पाए, संसार साँच्चै रंगीविरंगी पो रहेछ । कल्पनाभन्दा फरक, सोचेभन्दा अलग ।
यो उमेरमा उनले पहिलोपल्ट आकाशको रङ चिने । त्यो नीलो थियो । बादलको रङ चिने । सेतो थियो । रूख हरियो हुन्छ भन्ने सुनेका थिए । तर एउटै रूखका पातहरूमा पनि कैयौं थरी हरियो रङ हुँदा रहेछन् भन्ने चिने । शनैः शनैः रातो, पहेँलो, खैरो, बैजनी, गुलाबी र अरू–अरू रङ पनि चिने । उनले देखे, संसार अनेकन रङहरूले पोतिएको रहेछ । यो सरकारी कागजातमा टोपप्रसाद शर्मा नाम भएका सल्यान दमाचौरका ४५ वर्षीय नरहरिको कथा हो । २१ वर्षअघि र पछि गरी दुई भागमा बाँडिएको उनको जिन्दगीको पहिलो भागमा दुःख, सास्ती र हैरानीको पल्ला छ भने दोस्रो भागमा खुसी, उत्साह र आत्मविश्वासको पल्ला । जोखेर उनले हेरेका छैनन्, जिन्दगीमा केको पल्ला भारी छ । तर उनको निष्कर्ष छ, ‘म संसारका विरलै भाग्यमानी मान्छेमध्ये एक हुँ ।’
जन्मँदै दृष्टि गुमाएका नरहरि बायाँ आँखाको चेपबाट मसिनो सेतो धर्कोजस्तो उज्यालो मात्रै देख्थे । मुस्किलले दिन र रात खुट्ट्याउँथे । उनको दृष्टिक्षमता अक्षर चिन्न, बाटो पहिल्याउन, रङहरू ठम्याउन, मान्छे चिन्नजस्ता कुनै पनि अत्यावश्यक कामका लागि पर्याप्त थिएन । चिना टिप्पन हेर्दै अरूको भाग्य र भविष्य बताउने ज्योतिषी मेघराज शर्मा आफ्ना छोराको भविष्यबारे जानकार थिएनन् । उनकी जेई अर्थात् आमा गुप्तीकुमारी भने साइँलो छोरालाई दैवले ठगेको ठान्थिन् । आँखा नदेख्ने भएकै कारण उनले आठ वर्षको उमेरमा मात्र घरदेखि आधा घण्टाको दूरीमा रहेको भानुभक्त मावि टेके । छोरालाई स्कुल जान सजिलो होस् भनेर बाले काइँलो भाइसँगै उनलाई विद्यालय हाल्दिएका थिए । साथीहरू बेफिक्री दौडिन्थे । उनी पनि त्यसैगरी दौडिन खोज्थे । साथीहरू पुराना कपडा मोजामा कोचेर बनाइएको गोला खेल्थे । उनी पनि खेल्न खोज्थे । तर, प्रत्येकपल्ट ठेस लागेर लड्थे । त्यति बेलै उनले थाहा पाए, म अरूभन्दा फरक छु ।
‘फरक छु भन्ने त महसुस थियो । तर कति फरक छु भन्ने पत्तो थिएन,’ उनले भने । सहपाठीहरू उनको शारीरिक क्षमतालाई गिज्याउने विषय बनाउँथे । उनले भने, ‘हिँड्ने बाटोमा सिस्नो राखिदिन्थे । मलाई पोलेपछि उनीहरू खितखिताउँदै हाँस्थे । म रुँदै–रुँदै बाटो लाग्थे । देख्न सक्दैन भनेर बाटोमा काँडा राखिदिन्थे । पैंतालामा बिझेपछि म मूर्छा पर्थें तर साथीहरू हाँस्दै गिल्ला गर्थे ।’
इष्टमित्र भने उनलाई दयाको भावले हेर्थे र भन्थे, ‘विचरा यसले कसरी गरिखाला ? ’ जेई भन्थिन्, ‘हामी मरेपछि यसलाई कसले हेर्ला ? कसले पाल्ला ? ’ उनलाई स्पष्ट सम्झना छ, यसो भनेपछि प्रत्येकपल्ट आमा रुन्थिन् । आमाको आँखाबाट आँसु कसरी गुल्टिन्छ भन्ने त उनलाई थाहा थिएन । तर आमा सुँकसुँकाएको उनी थाहा पाउँथे र लख काट्थे, आमा मेरै पीरले रोइरहेकी छिन् ।
९ वर्षको उमेरमा उनलाई बाले नेपालगन्जको भेरी अञ्चल अस्पताल पुर्‍याए । गाउँबाट नेपालगन्जसम्म पुग्नु उति सजिलो थिएन । उनले त्यो समय सम्झिँदै सुनाए, ‘कहिले बाको हात समातेर हिँड्दै, कहिले पिठ्युँमा चढ्दै साढे तीन दिनपछि अस्पताल पुग्यौं ।’ त्यहाँ एक विदेशी डाक्टरले उनको बायाँ आँखाको शल्यक्रिया गरे । त्यसपछि आँखाको ज्योति फर्किन्छ भन्नेमा बा ढुक्क थिए । तर सोचेभन्दा ठीक उल्टो नतिजा आयो । १४ दिनको उपचारपछि जब उनले आँखाको पट्टी खोले तब थाहा पाए, रात–दिन छुट्याउने पातलो धर्कोजस्तो उज्यालो पनि आँखाबाट गयो । निस्पट्ट अन्धकारले घेर्‍यो ।
शल्यक्रिया असफल भएपछि डाक्टरले बालाई सुनाएको कुरा उनले झलझली सम्झेका छन् । भनेका थिए, ‘तपाईंको छोराको आँखा सधैंका लागि नबन्ने भयो । हुनेसम्म प्रयास गरें । केही सीप लागेन । अब पैसा सिध्याउने काम नगर्नुस् ।’ उनले त्यो दिन सम्झिँदै सुनाए, ‘डाक्टरको कुरा सुनेपछि बा सुँक्क–सुँक्क गर्नुभयो । खुइँय गर्दै लामो सास फेर्नुभयो । अनि पीरले दुई–तीन छाकसम्म भातै खानु भएन ।’
अस्पतालबाट फर्केपछि पनि उनले स्कुल जाने हिम्मत हारेनन् । उनी पढाएको सुन्थे । कण्ठस्थ पार्ने प्रयास गर्थे । आँखानजिकै ठूलो वर्णमाला लगेर अक्षरको आकार ठम्याउन खोज्थे । दृष्टि नभएकै कारण उनले तल्ला कक्षामा सुनाइ–बोलाइकै आधारमा कक्षा चढ्ने सुविधा पाए । अलिक माथिल्ला कक्षा पुगेपछि भने अरूलाई तीन घण्टाको परीक्षा समय तोकिँदा उनलाई अरूको सहयोगमा जति घण्टा लगाए पनि हुने गरी छुट दिइन्थ्यो । बेलाबेला उनी सकी–नसकी कापीमा कलम धस्थे । अक्षरको आकार त आउँथ्यो तर न डिको हुन्थ्यो न लहर मिलेको हुन्थ्यो ।
अरूलाई जस्तै उनका बालाई पनि दृष्टि नभएकाले पढ्न सक्छन् भन्ने पत्यार थिएन । चार कक्षाको कुरा हो । एक दिन बासँग अनुरोध गरे, ‘बा, सबै साथीले किनिसके । मलाई पनि डिस्नेरी किन्दिनु न ।’ जवाफमा जे आयो, त्यसले उनलाई पिडालु चपाएजस्तो बनाइदियो । उनले बाको जवाफ जस्ताको त्यस्तै सुनाए, ‘मह नकाढ्ने मौरीको चिलाइ धेरै । यही भन्नुभएको थियो बाले ।’
कहिलेकाहीँ रेडियोमा आँखा शिविर बस्दै छ भन्ने सूचना बज्थ्यो । उनी दाइलाई भन्थे, ‘मलाई त्यहाँ लग्देओ न । तै उपचार भइहाल्छ कि ।’ जवाफमा दाइ हकार्दै भन्थे, ‘तेरो आँखा जाँ गए पनि बन्दैन । उपचारका नाममा यसले धन मात्रै सक्ने भयो ।’ नेपालगन्जका विदेशी डाक्टरको कुरा सुनेर बा र जेईले पनि छोराले अब कहिल्यै आँखा देख्दैन भनेर आशा मारिसकेका थिए ।
नौ छोराछोरी पाएपछि पनि उनकी जेई गर्भवती थिइन् । सुत्केरी हुनु केहीअघि नै अत्यधिक रक्तस्राव भयो । त्यही छटपटीमा जेई बितिन् । त्यति बेला उनी १६ वर्षका मात्रै थिए । लगत्तै बाले अर्को बिहे गरेपछि उनको मन घरमा अडिएन । सबैको हेपाइ सहँदै हुर्केका उनी माया गर्ने जेई बितेपछि विरक्तिए ।
जेई बितेको पाँच वर्षपछि एक दिन उनले काइँलो भाइलाई फकाए, ‘हिँड् जाम शिवरात्रिको मेला हेर्न ।’ भाइको हात पक्रेर निस्किएका उनको उद्देश्य अर्कै थियो । भाइलाई फकाएर सल्यानकै शंखमूल भन्ने ठाउँसम्म आइपुगे । त्यहाँसम्म जेनतेन गाडी आइपुग्थ्यो । उनले पहिलोपल्ट गाडीको आवाज सुने । भाइलाई भने, ‘म गाडीको आवाज सुन्दै गर्छु । तँ मेलामा नाचगान हेर्दै गर ।’ भाइ हिँडेपछि उनी खुसुक्क गाडीभित्र लुकेर बसे ।
त्यो गाडी दाङको तुल्सीपुर पुगेर रोकियो । उनले सुनेका थिए, दुःख परेकालाई पुलिसले सहयोग गर्छ । उनले रेडियोबाट थाहा पाएका थिए, काठमाडौंमा ठूलठूला डाक्टर बस्छन् । त्यही सोचेर सके उपचार गरौंला नत्र त्यतै मरौँला भन्दै उनी काठमाडौं जान सुरिए । पुलिसकै सहयोगले साझा बस चढेर काठमाडौं आइपुगे । बालाजुको बसपार्कमा झरे र बटुवाको सहयोगमा गौशाला पुगे ।
गाडीले उनलाई ठ्याक्कै धर्मशालाअघि ओरालिदिएछ । कसैले हात पक्रेर धर्मशालाभित्र छिराइदियो । उनी छामछाम छुमछुम गर्दै यताउता हिँडिरहेका थिए । धर्मशालाभित्र क्यान्टिन चलाएर बसेका बिहार, किसनगन्जका मुकुलकुमार सिन्हाले उनलाई देखे । सित्तैमा एकछाक खान दिए । धर्मशालामा टोलाएर बसिरहेका बेला कसैले उनलाई आँखाबारे सोध्यो । त्यसरी मायालु स्वरमा सोध्ने को थियो, उनलाई थाहा छैन । न उनले नाम सोधे न सोध्नेले नै बतायो । त्यही अपरिचितले उनलाई तिलगंगाको आँखा अस्पतालबारे बताएर त्यसको गेटसम्मै पुर्‍याइदियो ।
उनलाई स्पष्ट सम्झना छ, त्यो २०५३ असोज ५ गते थियो । उनी अस्पतालको प्रांगणमा टुक्रुक्क बसिरहे । के बोल्ने, के सोध्ने ? कसलाई भेट्ने ? केही थाहा थिएन । कसैले उनको हात पक्रेर एउटा कोठाभित्र छिरायो । मधुरो स्वरमा सोध्यो– तिमीलाई के भयो ? उनले बेलीबिस्तार लगाए । ती मान्छेले सुस्तरी हात पक्रे । केही जाँच गरे र भने, ‘तिम्रो एउटा आँखा त बिग्रिसक्यो । अर्को पनि सजिलै बन्लाजस्तो छैन ।’ सुनेर उनलाई आकाश खसेर थिचेजस्तो भयो । भासिएको स्वरमा भने, ‘त्यसो भए मेरो जीवन यत्तिकै भयो हैन त ? यसैगरी बाँच्नुको त अर्थै छैन ।’ जीवनदेखि हार खाएको कुरा सुनेपछि ती मान्छेले भने, ‘तैपनि एकचोटि विशेष परीक्षण गरेर हेरौं ।’
अस्पतालका एक कर्मचारीले उनलाई कोठा नम्बर ३ भित्र छिराए । डा. नवीनचन्द्र राईले उनको विशेष परीक्षण गरे । अरू डाक्टरले के–के गरे, उनले मेसो पाएनन् । तर केही गरिरहेका छन् भन्ने महसुसचाहिँ गरे । बेलुकीतिर परीक्षणको रिपोर्ट आयो । सुरुमा जाँच्ने तिनै मान्छेले उनलाई स्नेही स्वरमा सुनाए, ‘तिम्रो आँखा त थोरै खुल्लाजस्तो छ ।’ अब नरहरिलाई संसारै खुलेजस्तो भयो । सुस्तरी भने, ‘खुलेन भने त मेरो जीवन यत्तिकै भयो । खुल्छ भने थोरै भए पनि खोल्दिनुस् ।’
शल्यक्रिया हुने भयो । उनले सोधे, ‘कति पैसा लाग्छ होला नि सर ? ’
तिनले उल्टै सोधे, ‘तिम्लाई पैसा ठूलो कि जीवन ?’
भने, ‘जीवनै ठूलो सर ।’
केही दिनमै शल्यक्रिया हुने भयो । तर अस्पतालबाट फर्केर उनी जाने ठाउँ थिएन । तिनै स्नेहीले उनलाई धर्मशालासम्म पुर्‍याइदिए र बस्ने चाँजो मिलाइदिए । शल्यक्रिया गर्ने दिन उनी सोध्दै खोज्दै अस्पताल पुगे ।
शल्यक्रियाअघि संरक्षकको हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कागजी प्रक्रिया बाँकी नै थियो । घरदेखि भागेर हिँडेको मान्छेको कहाँ संरक्षक खोज्नु ? उनले आफ्नो सबै कथा फेरि कर्मचारीलाई सुनाए अनि संरक्षक लेखिएको ठाउँमुनि आफ्नै हातले औंठाछाप लगाए । उनलाई शल्यक्रिया कक्षभित्र लगियो । उनले २३ वर्षअघिको त्यो क्षण सम्झिए, ‘भित्र लगेपछि के–के भयो मैले मेसो पाइनँ ।’ नरहरिको आँखामा जन्मजात मोतियाबिन्दु भएको रहेछ । स्नेही स्वरका तिनै डाक्टरले आँखाको लेन्सछेउ सानो प्वाल बनाए । अचुक तरिकाले केराउका दाना जत्रा मोतियाबिन्दु हटाए अनि प्लास्टिकका मसिना इन्ट्राकुलर लेन्स फिट गरिदिए ।
उनलाई सम्झना छ, शल्यक्रियामा डाक्टर नवीन र डाक्टर करुणा श्रेष्ठ पनि खटिएका थिए । शल्यक्रियापछि आँखामा पट्टी लगाइयो । अस्पताल बसुन्जेल कर्मचारी राधेश्याम शाहले उनलाई खाना र औषधिको प्रबन्ध मिलाइदिए । तेस्रो दिन पट्टी खोल्नुअघि स्नेही डाक्टरले सोधे, ‘आँखा देख्ने भयौ भने के गर्छौ ?’
उनले भने, ‘देख्ने मात्रै भए त कस्तो हुन्थ्यो ? कल्पनै गर्न सक्दिनँ ।’
सुस्तरी डाक्टरले उनको पट्टी खोलिदिए । त्यसपछि जे भयो, उनी शब्दमा वर्णन गर्न सक्दैनन् । उनी एकैचोटि आँखै तिरमिराउने उज्यालो संसारमा अवतरित भएका थिए । उनले आफ्ना अगाडि त्यही स्नेही स्वर भएको मान्छे देखे । उनी थिए, आँखाका प्रख्यात डाक्टर सन्दुक रुइत ।
उनले पहिलो पटक मान्छेको अनुहार देखे । त्यसपछि चारैतिर हेरे । स्पर्सबाट अनुमान लगाइएको वस्तुको आकार उनी आफ्नै आँखाले देखिरहेका थिए । प्रत्येक वस्तुका आ–आफ्नै रंग थिए । तर ती रंग उनले चिनेनन् । कुन रंगलाई के भनिन्छ, थाहा थिएन ।
उनले चारैतिर आँखा घुमाए तर केही बोल्न सकेनन् । त्यो पल सम्झिँदै उनले सुनाए, ‘एकैचोटि सोच्दै नसोचेको खुसी मिल्दा त बोल्ने शब्द पनि हराउँदो रै’छ ।’ नरहरिलाई आफू दोस्रोपल्ट जन्मेजस्तो महसुस भयो । पहिलोपल्ट आमाको कोखबाट । अर्कोचोटि डाक्टर सन्दुक नेतृत्वको शल्यक्रियाबाट । पहिलोपल्ट जन्मिँदा संसार अँध्यारो थियो । दोस्रोपल्ट जन्मिँदा उज्यालो ।
आँखामा नयाँ पट्टी राखियो । ११ दिनसम्म नियमित औषधि राख्नुपर्ने डाक्टरको सुझाव थियो । त्यतिन्जेल एउटै सुरुवाल र मैलो भइसकेको सर्ट देखेर अस्पतालले नै नयाँ कपडा किनिदियो । पट्टी खोलेपछि अस्पतालले उनलाई धुलो छेक्ने चस्मा लगाइदियो ।
आशा सकिएर निराशाको गर्तमा डुबेका नरहरि उपचार सकिएको २५औं दिन उत्साहको चुली टेक्दै हिँडिरहेको महसुस गर्दै थिए । उनी भर्खर संसार सिक्दै गरेको बालकझैं जिज्ञासु देखिन्थे । चारैतिर आँखा डुलाएको डुलायै गर्थे । प्रत्येक चिज अनौठो देख्थे । प्रत्येक दृश्य नयाँ लाग्थे । प्रत्येक मान्छे, तिनका हाउभाउ, तिनको अनुहारको भाव सबै–सबै नयाँ लाग्थे । अब उनी आफू जन्मेको, आफू हिँडेको, आफू लोटेको ठाउँ हेर्न चाहन्थे । बाको अनुहार हेर्न चाहन्थे । तर घर फर्किने भाडा कहाँबाट होस् । धर्मशालाका उनै मनकारी मुकुलले उनलाई तीन सय दिएर भने, ‘सके तिर्नू । नसके भैगो ।’
सबै कुरा उही थियो । तर नरहरिका निम्ति संसारै बदलिएको थियो । लड्दैपड्दै, छामछाम–छुमछुम गर्दै हिँडेको गाउँमा उनी ठमठमी हिँडिरहेका थिए । पाइलामा गति थियो, अनुहारमा आभा । आँगन नटेक्दै परबाटै उनलाई बाले देखिहाले । लडिहाल्लाजसरी बिस्तारै खुट्टाभन्दा हात अघि चालेर हिँड्ने छोरो ठमठमी हिँडेको देख्दा उनले लख काटिहाले– पक्कै छोराले दृष्टि पायो ।
उनले पहिलो पटक बाको अनुहार नजिकबाट हेरे । मान्छेका अनुहार फरक–फरक हुन्छन् । अनि बाको अनुहार झनै प्रिय हुन्छ भन्ने उनले त्यही बेला महसुस गरे । कसैले जवान बा, कसैले वयस्क बा देखे तर उनले देख्दा बाको अनुहारमा उमेरले धर्काहरू कोरिसकेको थियो ।
त्यो क्षण सुनाउँदै गर्दा उनको वाचाल मुख पनि टक्क रोकियो । शब्द घाँटीमै अड्कियो । आँखाको डिलभरि आइसकेको आँसु पुछ्दै भने, ‘धेरैबेरसम्म म बोल्नै सकिनँ । भावविह्वल भन्छन् नि, हो त्यस्तै भयो ।’ उनले लामो सास ताने । अनि फेरि भने, ‘दुःख भोग्नभन्दा त्यो भोगाइको कथा सुनाउन गाह्रो हुँदो रहेछ ।’
धेरै बेरपछि बाले आफूलाई सम्हाल्नुभयो र सोध्नुभयो, ‘कसरी देख्ने गराइस् त साइँला ।’ उनले सबै कुरा भने अनि मनमनै आमालाई सम्झिए । अनि भने, ‘अलि पहिल्यै उपचार पाएको भए त आमाको अनुहार पनि देख्न पाउँथेँ ।’ यति भनेर उनले पर्सबाट आमाको श्यामश्वेत फोटो निकालेर देखाए । अनि भने, ‘समयमै उपचार पाको भए फोटो हेरी चित्त बुझाउन पर्दैनथ्यो ।’
दृष्टि पाएपछि महिनौं लगाएर उनले रंगहरू चिने । अक्षरहरू काला मात्रै हुँदा रहेनछन्, रंगीचंगी हुँदा रहेछन् भन्ने थाहा पाए । किताबमा अक्षर मात्रै होइन, चित्र पनि हुँदा रहेछन् भनेर जान्न पाए । दृष्टि पाएपछिको पहिलो दसैंमा जमराको रंग चिने । अक्षता गाढा रातो हुँदो रैछ भन्ने थाहा पाए । मखमली फूल कलेजी रंगजस्तै हुन्छ, सुपारे फूल बैजनी रंगको हुन्छ भन्ने थाहा पाए । दसैं बल्ल दसैंजस्तो भयो । तिहार बल्ल झिलीमिली भयो ।
उनलाई जिस्क्याउनेहरू तर्किने भए । दया गर्नेहरू स्नेही भए । छुच्चाहरू पनि असलजस्ता भए । हेप्नेहरू नहेप्ने भए । सान्त्वना मात्रै दिनेहरू मिजासिला भए । उनले छुटेको पढाइ ९ कक्षाबाट अगाडि बढाए । एसएलसी सके । आत्मविश्वासको बलमा हिँड्नुको मज्जा लिए अनि आफ्नै बुताले हिँडेर घरदेखि दुई दिन परको उपिण्डेदहस्थित नवज्योति प्राविमा अस्थायी शिक्षकको जागिरे भए । त्यसपछि पनि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको पढाइ सकेरै छाडे ।
यिनै नरहरि अहिले सल्यानकै दमाचौर आधारभूत विद्यालयमा स्थायी प्रावि शिक्षक छन् । दुई वर्षपछि अवकाश पाउँदै छन् । उनले सोचिसकेका छन्– डाक्टर रुइतले मलाई दृष्टि दिएर नयाँ जीवन दिनुभयो । अब मैले पनि अरूलाई यसैगरी जीवन दिएर गुनको गुन तिर्नु छ । पशुपति धर्मशालाभित्र रेस्टुरेन्ट चलाएर बसेका मुकुलकुमार जसले चिन्दै नचिनेका नरहरिलाई सहयोग गरेर दृष्टि प्राप्त गर्ने बाटोमा सहयोगी बने । आइतबार दस बजेतिर धर्मशाला पुग्दा तीस वर्षदेखि एकै ठाउँ रेस्टुरेन्ट चलाएर बसेका मुकुल खाटमा ढल्किएर आराम गर्दै थिए । उनले दुई दशकअघिको समय सम्झिँदै भने, ‘छामछाम–छुमछुम गर्दै एउटा केटो आएको थियो । भलो होस् भन्ने चिताएर मैले सहयोग गरें । लेकिन त्यो कुनै ठूलो बात होइन ।’
मुकुलले खान र बस्न नदिएको भए, विश्वास गरेर घर फर्किन भाडा नदिएको भए आफूले कति दुःख पाउँथेँ, नरहरि स्वयंलाई थाहा छैन । त्यही गुन सम्झेर पनि प्रत्येकपल्ट काठमाडौं आएका बेला नरहरि उनलाई श्रद्धापूर्वक भेट्छन् । छुट्टिने बेलामा मनकारी मुकुलले जीवनको निष्कर्ष सुनाएजसरी भने, ‘यो दुनियाँमा राम्रैराम्रा मान्छे छन् । लेकिन नराम्रा मान्छेकै धेरै प्रचार भइरहे ।’
त्यसो त मानवीय सेवाभावले भरिएका आँखाका विश्वविख्यात चिकित्सक डा. रुइतसँग भेट नभएको भए नरहरि कहाँ के गर्दै हुन्थे ? यसको उत्तर उनीसँग छैन । डा. रुइतले उनको दृष्टि मात्रै फर्काइदिएनन्, नयाँ जीवनकै बाटो देखाइदिए । त्यही नयाँ बाटो हिँडेर शिक्षक भएका नरहरि गत शुक्रबार काठमाडौं आएका थिए । डा. रुइतसँग तीन वर्षको सहकार्यपछि अस्ट्रेलियाली पत्रकार अलि ग्रिपरले लेखेको ‘द बेयरफुट सर्जन’ पुस्तकको खगेन्द्र संग्रौलाले गरेको नेपाली अनुवाद विमोचन गर्न उनी निम्त्याइएका थिए ।
पुस्तक विमोचनपछि नरहरिले भने, ‘सन्दुकले आँखाको अप्रेसन गरेपछि मेरो दोस्रो जीवन सुरु भयो ।’ नरहरिको बदलिएको संसारबारे किताबमा यस्तो लेखिएको छ– अस्पताल आउँदा उनी दुब्लापातला र कुप्रो परेका थिए । बर्खायामको एक गर्मी अपराह्न आफूलाई डोर्‍याउने मानिसको कमिजको फेर समातेर धर्मराउँदै बसबाट ओर्लेर, बडो मुस्किलले वाग्मतीमाथिको पुल पार गरेर उनी अस्पतालको गेटमा आइपुगेका थिए । त्यसबखत उनीसँग खल्तीमा पाँच रुपैयाँ र लगाएको कमिज, सुरुवाल र चप्पलसिवाय केही थिएन । नरहरिले पत्रकार अली ग्रिपरसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, ‘डाक्टर रुइतलाई कसरी स्याबासी दिने हो, मलाई थाहा छैन । मेरा लागि यो संसारमा दुईवटा चीज छन्– भगवान् र डाक्टर रुइत । साँच्चै भनूँ भने यी दुई चीज उस्तै हुन् । डाक्टर रुइतले मलाई नेत्रज्योतिभन्दा धेरै चीज दिए । उनले मलाई अर्को जीवन दिए ।’
रामोन म्यागसेसेका साथै हालैमात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातबाट राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार पाएका डा. रुइतले कति हजार नरहरिहरूको उपचार गरे त्यसको गणना सजिलो छैन । तर अझै नथाकेका यी डाक्टरले आफूले शल्यक्रिया गरेका एक लाख बीस हजारभन्दा बढीमध्ये नरहरिलाई नै किन सम्झे ? किन उनैलाई किताब विमोचन गर्न सल्यानदेखि काठमाडौं झिकाए ?
यो प्रश्नको जवाफमा विमोचनको भोलिपल्ट डा. रुइतले प्रसन्न भावमा भने, ‘जसरी तपाईं (पत्रकार) हरू सयौं रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ, तर एकाध रिपोर्टिङले हृदय छुन्छन् नि, हो त्यस्तै हो । उनको कथा पनि मेरा लागि त्यस्तै हो । उनी दारुण अवस्थामा काठमाडौं आएका थिए । दृष्टि पाएपछि उनको जीवन फेरियो । उनले आफ्नो परिवारको मात्र नभई समाजकै जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् । पहिलोपल्ट भेट्दा उनी जीवन सकियो भनेर हार मानिरहेका थिए । तर दृष्टि पाएपछि अरूलाई शिक्षाको उज्यालो बाँडिरहेका छन् । त्यही भएर पनि मैले उनैलाई सम्झेको ।’ प्रकाशित : आश्विन १४, २०७६ ०७:२८
आश्विन १४, २०७६ दीपेन्द्र विष्ट
काठमाडौँ — सरकारले पूर्ण सरसफाइका सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगरी मुलुकलाई ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा’ गरेको छ । ०६८ मा ‘एक घर एक चर्पी’ नारासहित सुरु गरिएको खुला दिसामुक्त घोषणा अभियान ८ वर्षपछि पूरा भएको दाबी सरकारले सोमबार गरेको हो । दक्षिण एसियामै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने नेपाल पहिलो मुलुक भएको दाबी सरकारको छ ।
सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकले भने ‘एक घर एक चर्पी’ को लक्ष्य र पूर्ण सरसफाइका मापदण्ड पूरा नभएको देखाएका छन् । खानेपानी विभागले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल मुलुकभर करिब ५६ लाख ६० हजार २ सय १४ वटा शौचालय छन् । यो संख्या जम्मा घरपरिवार संख्याको एक तिहाइभन्दा केही बढी मात्रै हो । तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको ०७४ को जनसंख्या र घरपरिवारसम्बन्धी प्रक्षेपित तथ्यांकीय विवरणमा मुलुकमा १ करोड ४८ लाख ५० हजार ३२ घरपरिवार रहेको उल्लेख छ । ०६८ मा यो संख्या १ करोड ३६ लाख ४५ हजार ४ सय ६३ थियो ।
खानेपानी विभागका अनुसार मुलुकभर करिब २८ सय सार्वजनिक शौचालय छन् । तर मुख्य राजमार्ग र सहरी क्षेत्रमा पर्याप्त शौचालय छैनन् । भएका पनि प्रयोगमैत्री, अपांगमैत्री र बालमैत्री छैनन् । मापदण्डअनुसार तराईमा ५० किमिको फरकमा राजमार्गमा एउटा शौचालय हुनुपर्छ । पहाडमा करिब ३० किमि फरकमा शौचालय हुनुपर्छ । तर, पेट्रोलपम्प भएका स्थानबाहेक अन्यत्र सार्वजनिक शौचालय रहेको पाइँदैन । ०६८ मा कास्की जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दै सुरु गरिएको अभियान यही असोज ४ गते भोजपुर जिल्लालाई दिसामुक्त घोषणा गरेपछि समापन भएको दाबी गरिएको थियो ।
तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले अभियानको सुरुवात गरेपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, गैरसरकारी संस्था र जिल्ला खानेपानी कार्यालयले भटाभट खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा चलाए । तर अधिकांश स्थानमा सरसफाइका न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गरिएनन् । निर्माण भएका शौचालयमा अत्यावश्यक पानीको सुविधासमेत राखिएन । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ । खानेपानीलगायत पूर्ण सरसफाइका सूचकांकहरूसमेत गाउँ–गाउँमा उपलब्ध नभएको सरकारकै प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । चर्पीको नियमित प्रयोग, साबुन पानी र रुमालको प्रयोग तथा हातधुने बानी, स्वच्छ खानेपानी, स्वच्छ खानेकुरा, घरायसी सरसफाइ र वातावरणीय सरसफाइलगायत पूर्ण सफाइका सूचकांकमा पर्छन् ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीका एक गाउँमा खानेपानीको धारा नै नरहेको बताए । ‘पानी भए पो शौचालय सफा हुन्छ, एक घर एक धारा कहिले पूरा हुन्छ भन्न सकिन्न, कतै त पूरै गाउँमा समेत खानेपानीको धारा छैन,’ उनले काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा भने ।
विभागका अनुसार ८९ प्रतिशत जनताको खानेपानीमा पहुँच छ तर २१ प्रतिशतले मात्रै स्वच्छ खानेपानी पिउने गरेका छन् । अधिकांश सार्वजनिक शौचालयमा पानीको समस्या छ । ‘पानी शौचालयको न्यूनतम सूचकांक हो, त्यो छैन भने खुला दिसामुक्त घोषणा गरेको कुनै अर्थ छैन,’ पूर्ववातावरणमन्त्री एवं पानी संरक्षण अभियन्ता गणेश साहले भने, ‘तैपनि यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिनुपर्छ, किनभने केही त भएको छ ।’ उनका अनुसार पानी, साबुन, शौचालयको सरसफाइ सामग्री र सुरक्षालगायत शौचालयका न्यूनतम सूचकांक हुन् ।
०३७ देखि नेपालले औपचारिक रूपमा सरसफाइ प्रवर्द्धनको थालनी गरेको थियो ।
खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यक्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि मुलुकले ठूलो फड्को मारेकाले मुलुकलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सफल भएको बताए । अब स्वच्छ खानेपानीमा पनि सबैको पहुँच पुग्छ,’ उनले भने ।
खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले ढिलै भए पनि खुला दिसामुक्त घोषणा गरेर जनतालाई केही राहत दिएको बताइन् । ‘यो जनतालाई समृृद्धि र विकासतिर डोर्‍याउने अभियान हो, अब सबैले यसमा साथ दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अब जनतालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने अभियानमा अघि बढ्छौं ।’
०३७ मा २ प्रतिशत नेपालीको शौचालयमा पहुँच थियो । ०४६ सालसम्म बढेर ६ प्रतिशत पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय खानेपानी र सरसफाइ दशक २०३८–२०४६ को थालनी भएपछि मुलुकले औपचारिक रूपमा सरसफाइको प्रवर्द्धन
थालेको थियो ।
खुला दिसामुक्त घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘सूचकांक पूरा नगरेका जिल्लालाई हतारमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो,’ करिब २० वर्षदेखि सरसफाइ तथा खानेपानी क्षेत्रमा काम गर्दै आएका समाज विकास पथका अध्यक्ष सत्यनारायण साहले भने, ‘अलि चाँडो भयो, हल्ला गर्न मात्र घोषणा गरेजस्तो छ ।’
राजमार्ग, सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयको नभएको भन्दै उनले भएकाको पनि अवस्था ठीक नभएको बताए । जनकपुरको दस बिघा क्षेत्रको उदाहरण दिँदै उनले ८ वर्षदेखि दुईवटा सार्वजनिक शौचालय अलपत्र अवस्थामा रहेको जनाए । ‘पूर्वपश्चिम राजमार्गमा खै सार्वजनिक शौचालय ? अनि सरकारी कार्यालयमा खै त अपांगमैत्री शौचालय ? ’ उनले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा महिलालाई शौचालयको निकै समस्या छ ।’
अब मुलुकलाई भिखारीमुक्त बनाउँछौं : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दै अब मुलुकलाई भिखारी र बेसहारामुक्त बनाउने दाबी गरेका छन् । कोही भिखारी र बेसहारा भेटिए खबर गर्नसमेत उनले आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले खुला दिसामुक्त घोषणाले मुलुक अब विकास र समृृद्धिको बाटोतिर लम्किएको बताए । ‘यो एउटा अभियान मात्र हो, अब मुलुक विकासको बाटोमा अग्रसर भएको प्रमाण हो,’ उनले भने, ‘स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको अभावले मर्नुपर्ने अवस्था छैन, ती दिन गए ।’ प्रत्येक दिन नेपालीको औसत आयु बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले अब ८० वर्ष पुग्ने बताए । हाल नेपालीको औसत आयु ६९ वर्ष छ ।
‘केही वर्षअघि झाडापखालाबाट बालबालिकाको मृत्यु भएको खबर सनसनीपूर्ण रूपमा बाहिर आउँथ्यो, बाल मृत्युदर निकै बढी थियो,’ उनले भने, ‘सरसफाइ र स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पुगेपछि त्यो पनि न्यून हुँदै गएको छ ।’ दस वर्षअघि नेपालमा बाल मृत्युदर बर्सेनि ७ हजार थियो भने हाल ७ सय हारहारीमा छ । ‘सरसफाइ र स्वच्छ खानेपानीमा सबै नेपालीको पहुँच बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘अब बाल मृत्युदर केही वर्षभित्रै शून्य हुन्छ ।’
प्रकाशित : आश्विन १४, २०७६ ०७:२२